Hitohy anio ny fitsarana ny “Raharaha Apollo 21”: namoaka tsiambaratelo ireo mpisolovava ny “ Apollo 21” | NewsMada
Hitohy anio ny fitsarana ny “Raharaha Apollo 21”: namoaka tsiambaratelo ireo mpisolovava ny “ Apollo 21”
Par Taratra sur 07/12/2021
Niakatra fitsarana ady heloka bevava tetsy Anosy, omaly, ny “Raharaha Apollo 21”, nahavoarohirohy ireo olona 20 mianadahy. Namoaka ny tao ambadik’ity fikasana hamono ny filoham-pirenena ity ireo mpisolovava.
Mety haharitra andro maromaro. Nahitsy ny mpisolovava an-dRafanorahana Paul, nanoloan’ny filohan’ny fitsarana fa tsy ara-dalàna ny fanenjehana ny olona arovany noho ny famborahana ny tsiambaratelon’ny famotorana. “Tsy mifanaraka amin’ny fehezan-dalàna paika ady heloka izany. Nalaina sary ny fakana am-bavany ny olona arovanay nandritra ny famotorana azy teny Ivato”, hoy izy ireo. Nampiahiahy ireo mpisolovava ny momba ity antontan-taratasin’ady ity noho izany fandikan-dalàna izany. Eo koa ny fandikana ny zo miaro ny voampanga. Nampametra-panontaniana ny antony nahatonga ny fakana sary mandritra ny famotorana izy ireo. Nohitsin’izy ireo koa ny efa nanamelohan’ny minisitra iray sy ny lehiben’ny Andrimpanjakana sahady ny olona arovany . Tahaka izany koa ny famoahan’ny haino aman-jery samihafa eto an-toerana sy ny any ivelany izany efa fanamelohana izany.
Tambajotra “Mafia” akaiky ny filoha Rajoelina
Voaresaka koa ny fanilihana ireo ambara fa tambajotra na “Mafia” akaiky ny filoha Rajoelina ka naha voatonona ireo mpanao politika sy mpandraharaha. Eo koa ny fifandraisan’izany amin’ny fitrandrahana solika. Ho azy ireo, tsy nanara-dalàna aloha izany teo amin’ny fombafomba samihafa nialoha izao fitsarana izao. Nifarana teo amin’ny fihainoana ny mpisolovava aloha izany ny raharaha rehefa naharitra ora valo mahery ary hitohy anio indray.
Tsiahivina fa nanomboka tamin’ny fiantsoana ny anaran’ireo voampanga sy ny famakiana ireo antontan-taratasy momba ny heloka anenjehana azy ireo ny fitsarana ny tapany maraina. Voalaza tao anatin’izany ny fifandraisan’ireo ahiana ireo amin’ny mpitondra fivavahana iray sy i Sareraka. Eo koa ny momba ilay volabe 900 tapitrisa Ar sy ny basy ary ny fifandraisana an-telefaonina sy ny ordinatera.
Niatrana ny Emmo/Reg
Anisan’ny vesatra iampangana azy ireo ny fananganana fikambanan-jiolahy, ny fanonganana ny governemanta, ny fikasana hamono ny filoham-pirenena ary ny fitazonana fitaovam-piadiana tsy nahazoana alalana.
Anisan’ny voasaringotra amin’izany ny vehivavy roa sy lehilahy 18 ahitana manamboninahitra 13. Anisan’izany ilay “commando” Frantsay, François Marc Phillipe, ilay teratany malagasy frantsay, Rafanoharana Paul mivady, ny Jly misotro ronono isany, Ramahatra Victor, Razakarimanana Ferdinand sy ny am-perinasa, ny Jly Rakotoarison Anthony, Sareraka ary ireo zandarin’ny GSIS…
Etsy andaniny, niatrana teny amin’ny fitsarana ny Emmo/Reg, amin’ny fiara 4×4 miisa efatra nahitana zandary maherin’ny 30, mirongo basy. Hita tany anaty efitranon’ny fitsarana sy tety ivelany izy ireo, niaraka amin’ny mpiandry fonja. Teo koa ireo mpitandro filaminana manao fanamiana sivily. Nisy koa ny fisavana ireo niditra ny tribonaly Anosy.
Jean Claude sy Synèse R.